Nafaqada dhirta | October 2019
Marka laga faa'iideysto caafimaadka dadka: isticmaalka iyo ka horjeeda
Ugu Weyn Ee Nafaqada dhirta
Sida loo isticmaalo HOL
Dhamaan xoolo-dhaqatada, labadaba khibrad iyo jibbaar, waxay yaqaanaan ku saabsan HOL (carbamide). Tani waa bacriminta iyo bacriminta waxtarka leh ee beerta. Maanta waxaan kuu sheegi doonaa waxa carbamide ay tahay, qawaaniinta loo isticmaalo bacriminta, iyo sida loola macaamilo cayayaanka ee beerta leh carbamide. Waa maxay carbamide Urea (HOL) - Bacriminta nitrogen ee granules, kaas oo si ballaaran loo isticmaalo beerista iyo beeraha, ka sokow waa jaban oo la awoodi karo.
Isticmaalka ash qoryo bacriminta
Tan iyo wakhtiyadii hore, dadku waxay isticmaalaan ash alwaax ah bacriminta. Ash ma aha oo kaliya bacriminta, laakiin sidoo kale dhismaha ciidda. Isticmaalka ash ee beerista marmarka qaarkood waxay hagaajineysaa qaabka farsamada iyo kiimikada ee carrada. Ash waxay leedahay hanti si ay u yareeyaan acidity, dardar-kufin of compost iyo dabacsan ciidda.
Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan koritaanka ubax ee dacha
Warshad alerji ah ilaa 2.5-3 mitir dheer oo leh caleemo waaweyn oo si qumman u xasuusta geed caleenta waa castor. Nooca dhirta waa mid aan caadi ahayn, taas oo soo jiidata beeraley badan oo sababa rabitaan ah in ay koraan. Saliidda shidaalka leh waxay leedahay waxyaalo badan oo ah beerashada iyo daryeelka beerta furan, taas oo ku habboon akhrinta.
Waa maxay cusbada potassium
Qaybaha ugu muhiimsan ee lagama maarmaanka u ah geed walba waa potassium, nitrogen iyo fosfooraska. Waxay sameeyaan waxyaalo adag oo loogu talagalay kobcinta ciidda, laakiin mid waliba si gaar ah ayaa loo isticmaalaa si loogu magdhabo halista ama walaxda kale. Maqaalkani wuxuu u sheegi doonaa wax kasta oo ku saabsan cusbo potash - waxa ay tahay, waxa bacriminta potassium yihiin, muhiimad ay u tahay dhirta, sida milixda potassium waa la daadiyey, sida loo isticmaalo beeraha, waxa siinayaa potassium dhirta iyo calaamadaha of la'aanta.
Bacriminta for quudinta geedo Stimul - tilmaamaha isticmaalka
Dusha sarreeya leh Bacriminta macdanta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dalagyada kala duwan ee koraya, sababtoo ah hordhaca wax soo saarka jirka oo keliya ma bixinayo dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka ah. Waa maxay Bacriminta loo baahan yahay geedo? Nasiib daro fosfooraska iyo potassium, tusaale ahaan, waxay u horseedi doontaa qadarka ugu yar ee sonkorta, oo ay ku yar tahay boron, dhadhanka miraha ama berry ma noqon doono mid hodan ah oo cadeeyn ah sida aan jeclaan lahayn, oo aan lahayn nitrogen, koritaanka ubax iyo miraha miraha ayaa halis gelin doona.
"Shining-2": tilmaamaha isticmaalka daroogada
Haddii aad rabto in aad hesho goosashada qani ku ah, waa inaadan si joogto ah u daryeeli dhirta oo aad siisid xaalado raaxo leh, laakiin sidoo kale waa inaad ku hawlan bacrimintooda. Doorasho aad u fiican oo beeraley badani waa badeecada bayoloji ee "Shining-2", oo ay ku jiraan kiimikooyinka laga soo xulay dalagyada faa'iido leh.
Khamriga sida bacrimin ah dhirta: sida loo sameeyo dhar-khamriga
Waxay muddo dheer qarsoodi ahayd in khamiirka aan loo isticmaalin oo kaliya in lagu karsado iyo khamriga la diyaariyo, laakiin sidoo kale daawada iyo qurxinta. Isticmaalka kale ee isticmaalka waa khamiir beerta khudradda, si loogu quudiyo dhirta. Ka fikir maqaalkan sida ay u saameynayaan dhirta iyo sida loo quudiyo dhirta leh khamiir.
Ogow waxa faa'iidooyinka iyo waxyeelada baradhada ceeriin ee jidhkaaga!
Qiimaha Rose Chippendale, Soo-saarista iyo Daryeelka
Epik F1 oo ah ukunta hore ee ukunta
Cyst ovarian in lo'da
Udder qanjirada oo barar ah: sida loo daweeyo
Bannaanka u khibrad leh waxay leeyihiin cuntadooda u gaarka ah si guul leh u kobcaya yaanyada, kuwaas oo dhan kuwaas oo kala duwan. Iyada oo aan loo eegin sida aad u wadaagtid cuntooyinkaas, qof walba waxa uu ka heli doonaa wax cusub iyaga oo raacsan guushooda. Talooyinka hoos ku qoran waxay hubinayaan inay yihiin xaalad cusub oo natiijo fiican leh. Ku socoshada waddo fudud, laakiin si fiican u socota, xitaa bilawga ayaa helaya natiijo wanaagsan. Read More
Waa faa'iido leh in la ogaado ubaxleh iyo waayo-aragnimo u leh: sifooyinka daryeelka ee pelargonium guriga dhexdiisa
Sidee loo daaweeyaa saliida beerka ee yamaariga ah, tilmaamaha, faa'idooyinka iyo waxyeelada saliidda
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Nafaqada dhirta 2019